थुप्रै दम्पतिबीच किन कम हुन्छ रो-मान्स र आत्मियता? खुल्यो यस्तो रहस्य! - Bigul News
थुप्रै दम्पतिबीच किन कम हुन्छ रो-मान्स र आत्मियता? खुल्यो यस्तो रहस्य!
भदौ ३०, २०७७ SG
लामो समयसम्म साथ रहने जोडीहरु एक समयपछि सम्बन्धमा पहिला जस्तो उत्साह महसुस गर्दैनन् । विशेष गरि यौ-नलाई लिएर जोश निकै कम हुन्छ। मनोबैज्ञानिकले पनि यस्तो हुनुको कारण जान्ने कोशिस गरेको छ। सयौं व्यक्तिहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा, दम्पतीहरूलाई उनीहरूले किन रो-मान्समा पहिला जस्तो जोश कम महसुस गर्छन् र राम्रो यौ-न जीवन नहुनुको कारण केहो भनेर सोधिएको थियो।
यो स्टडी इभोलुशनरी साइकोलोजी जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। यस स्टडीमा स्वयम्सेवकहरूलाई धेरै प्रकारका प्रश्नहरू सोधिएको थियो। यसबाट मनोवैज्ञानिकलाई कुल ७८ कारण थाहा भयो जुन दम्पतीहरुको यौ-न उत्साह कम गर्दछ। यस बाहेक सबैभन्दा ठुलो कारण समय कम पाउनु हो । धेरै मानिसहरूले गुनासो गरिरहेका थिए कि उनीहरूको पार्टनरले हरेक समय उनीहरूलाई समय दिने कोशिश गर्दछ, जसको कारण उनीहरूलाई एक प्रकारको दबाब महसुस हुन्छ।
रिसर्चमा मनोवैज्ञानिकले पत्ता लगाए कि अनुसन्धानमा सोधिएको प्रश्नमा पुरुष र महिलाको प्रतिक्रिया एकै प्रकारको थियो। तर बढी जस्तो पुरुषले यो स्वीकार गरेकी उनिहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई निभाउन या पार्टनर प्रति बफादार रहनमा असफल रहे। त्यस्तै पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाहरुले धेरै समयसम्म काम गर्नु पनि खराब यौ’न जीवनको कारण बताए।
यस रिसर्चमा सबैभन्दा अचम्मित कुरा के छ भने धोका पाएको कारण यौन जीवनमा असर परेको कमै मानिसमा मात्रै पाईएको छ। रिसर्चमा यस्तो दम्पतिको जोडी निकै कम थियो जसले पार्टनरबाट धोका पाएको कारण यौ-न आनन्द लिन बन्द गरेको थियो।
सम्बन्धमा आत्मीयता महत्त्वपूर्ण:
यो अनुसन्धान साइप्रसको निकोसिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका हुन्। स्टडीका प्रमुख प्रोफेसर मेनेलेओस अपोस्टोलो द मेलले बताएअनुसार, ‘सम्बन्धमा आत्मियता हुन निकै जरुरी छ। हुनत थुप्रै मानिसलाई यस्तो गर्न निकै कठिनाई महसुश हुन्छ। आत्मियताको कमिको कारण थुप्रै मानिस भावनात्मक रुपबाट पिडा महसुश गर्छन।’
प्रकाशित : मङ्गलबार, भदौ ३०, २०७७०८:४५
३३ मिनेट अगाडि SLPA
१७ घण्टा अगाडि SLPA
१९ घण्टा अगाडि SLPA